Dowlada oo bilowday dadaalo ay ku doonayso in dib loogu soo celiyo xiriirkii hore ee Shiinaha – idalenews.com
Dowlada Soomaaliya ayaa bilowday dadaal ay ku doonayso in ay dib ugu soo celiso xiriirkii ka dhexeyn jiray dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha.
Wasiirka arrimaha dibada Fowsiyo Yuusuf Xaji ayaa amaantay xiriirkii ka dhexeyn jiray Soomaaliya iyo Shiinaha iyadoo u waramaysay wakaalada wararka ee Xinhua.
Shinaha iyo Soomaaliya waxa ay lahaayeen xiriir wanaagsan laga soo bilaabo 1960kii markaa oo dowlada Shiinaha sidii ay dib ugu soo noqon lahayd Qaramada Midoobay aan gacan weyn ka geysanay.”ayay tiri Fowsiyo Yusuf.
Wasiirka arrimaha dibada ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dowlada Shiinaha ay gacan ka siisay dowladii hore ee Soomaaliya isbitaal iyo garoonka kubbada cagta oo ay Muqdisho ka dhistay iyo wadada dheer ee isku xirta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
“Shiinaha waxa ay ka hirgelisay mashaariic badan dalka Soomaaliya waana u mahad celinaynaa dadka Shiinaha iyo dowladaba,”ayay sii raacisay.
Tan iyo markii dowlada ay ka baxday xilliga kumeelgaarka ah ayaa dowlada Soomaaliya waxa ay bilawday dadaalo ay ku doonayso inay dib ugu soo celiso xiriirkii ay la lahayd dalalka caalamka.
Dhowaan ayaa waxa ay dowladu ku guuleysatay inay dib u soo celiso xiriirkii kala dhexeeyay wadanka Maraykanka. Waxaana dalka haatan dib ugu soo noqonaya dad hore uga barakacay oo sanado badan ku noolaa wadamada qurbaha ah, wasiirka arrimaha dibada ee Soomaaliya oo arrintaas ka hadlaysa ayaa waxa ay tiri:
“Bil walba waxaa dalka dib ugu soo laabanaya ugu yaraan kun ruux.Dad badan ayaa waxa ay go’aansadeen inay soo laabtaan oo ay wadankooda maalgeliyaan,”